Imfundo "ye-Kromoglin" ibhekisela eqenjini lama-membrane okuqiniswa kwamaseli omzimba, izidakamizwa zokulwa nezifo. Indlela yokwehliswa kwezidakamizwa ingenxa yokukwazi ukuvimbela ukungena emangqamuzaneni amancane e-calcium, ngaleyo ndlela ivimbele ukudonswa kwegazi nokukhululwa kwezimbangi zegazi (histamine ne-bradykin), into (ukuphendula kancane kancane) nezinye izingxenye eziphilayo ezisebenzayo.
Isidakamizwa sikhiqizwa ngesimo sesisombululo sokugxilisa iziqu kanye ne-spray spray.
Ukwamukelwa kwezidakamizwa nge-intranasal kuvela kumcucu wezingu-7% futhi kuxhomeke kumthamo wezingcingo zamangcwaba, okwenyuka kwesamba esinciphisa izinga lokumuncwa.
Uma kwenzeka ukungena ngengozi, ukumunca kwesidakamizwa esivela kumgudu wokugaya kuyinto encane (ngaphansi kuka-1%). Ukuncintisana kwenziwa ngefomu elingaguquki ne-bile nomchamo ngamanani alinganayo alinganayo.
"Cromoglyn". Imiyalo. Isiboniso.
Imithi ishiwo ngomkhuba ophthalmic ukwelashwa kwe-conjunctivitis yendlela yokugula yokuphila okungapheli futhi okunamandla, i-spring keratoconjunctivitis.
"I-Kromoglin" (i-spray spray) iboniswa ukwelapha kanye nokuvimbela unyaka wonke nonyaka we-allergenic rhinitis.
E-ophthalmology, lesi sidakamizwa siboniswa abantu abadala nabantwana abangaphezu kweminyaka emine.
"I-Kromoglin" (amaconsi asehlo) inqunywe usuku ngokudonsa izikhathi ezine. Uma kunesidingo, ukusetshenziswa kwedonsa yezinsuku eziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili ngosuku kuvunyelwe. Izikhathi phakathi kokufakwa emva kokufinyelela umphumela wokwelashwa zinganda.
"Ukufundiswa kwe-Kromoglin" kuvumela izingane ezingaphansi kweminyaka emine ukuthi zinikezwe futhi ziqondiswe udokotela.
Ukungcwaba kwenziwa esikhwameni se- conjunctival, ukudonsa ijwabu leso elingaphansi, ngaphandle kokuthinta iso. Ukuze usakaze ngokulinganayo isixazululo, udinga ukukhanya.
Ngendlela ye-spray "iKromoglin" Kunconywa ukuthi usebenzise umjovo owodwa ngosuku ngosuku ngalunye. Ngokujwayelekile, irejista yokulinda isethwe ngabanye ngososayensi. Kwezinye izimo, ingafakwa umjovo kasithupha ngosuku noma izikhathi ezimbili kuya kwezine.
Emiphumeleni emibi yesidakamizwa "i-Kromoglin" imfundo ibhekisela ekuzweleni kokubonakala kwezinto ezifakiwe emehlweni, ukushisa, ukuminyanisa, ukuvuvukala kwe-conjunctiva. Ngemuva kokujola emphunjini, iziguli zingase zibone ukucasuka okuncane okuncane, ezimweni ezingavamile, ikhanda, izinkinga ze-nosebleeds, ukukhwehlela, izinguquko zokunambitheka, ukukhwehlela, izinambuzane ezifakwe emanzini, i- angioedema, i- hoarseness, ukuvuvukala ku-larynx.
Ukuziphendulela komzimba kungukuphikisana nokuqokwa kwemithi.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngesikhathi sokulahlwa futhi ngesikhathi sokubeletha, ikakhulukazi phakathi nenyanga yokuqala, kungenzeka kuphela ekunconyweni futhi ngaphansi kokuqondiswa kukadokotela. Ngokwezifundo zomtholampilo kanye nokuhlola, umphumela we- teratogenic of the ingredient esebenzayo (i-cromoglic acid ye- usawoti sodium) ayizange ibonwe. Into esebenzayo iyakwazi ukukhipha ubisi lomama ngesamba esingenasidingo, okusobala ukuthi asisongeli ezinganeni.
Uma usebenzisa lesi sidakamizwa "i-Kromoglin" akunconywa ukusebenzisa amalensi oxhumana nabo. Uma kunesidingo, ukusetshenziswa kwama-lens aqinile kuvunyelwe, okungafanele kufakwe ngaphambi kwamaminithi ayishumi nanhlanu emva kokusebenzisa isixazululo.
Iziguli ezilahlekelwa okwesikhashana embonweni ocacile ngemuva kokuthi ukuphathwa kwamaconsi akukhuthazwa ngokushesha ngemuva kokusebenzisa lesi sidakamizwa ukuba sisebenze emsebenzini ongase ube yingozi.
Amacala okudlula ngokweqile emisebenzini yomtholampilo ayichazwa.
Isidakamizwa kufanele sisetshenziswe ngemuva kokuzenzekelayo ngamasonto amane.
Isidakamizwa esithi "Revmoxicam": imiyalelo yokusetshenziswa (imijovo, amaphilisi namakhandlela). Ama-analogues nezibuyekezo mayelana nomuthi
Umuthi "Alprazolam". Imiyalo yokusetshenziswa
Imiyalo yokusetshenziswa kwezimpande ze-licorice yezifo ezihlukahlukene
Imithi "I-Cyclophosphan": imiyalo yokusetshenziswa, intengo, ama-analogues, umkhiqizi nokubuyekezwa
I-Medifox iyisidakamizwa esibhekene nezinyosi. MediFox: ukubuyekezwa, isicelo, imfundo, intengo
Ukulungiselela ukuhlaziywa "Spaskuprel": imiyalelo yokusetshenziswa
Indlela marinate izinhlanzi ukuze izoso: zokupheka best namathiphu
Concept nezinhlobo zezivumelwano ngamazwe
Umlingisikazi Molly Ringwald: amabhayisikobho, biography, empilweni yakho
Bangaki abantu abafa ku-Titanic? Umlando Weqiniso we-Catastrophe
Okudla "amacembe eziyisithupha": ukubuyekezwa, imenyu kanye imodi wokusebenza
Download Animated Film: Uhlu
Ihhotela Fujairah Rotana Indzawo yekungcebeleka SPA al Aqah Ibhishi (United Arab Emirates / Fujairah): izithombe kanye nokubuyekeza
Incazelo "Neman" sibhedlela. Sibhedlela "Neman" Grodno esifundeni: incazelo, amanani, ukubuyekezwa